ज्योतिषमा राहु (Rahu) ग्रहको महत्व र यो ग्रहले मानव जीवनमा पार्ने प्रभाव,The importance of the planet Rahu in astrology and its effect on human life, Rahu, Rahu planet, Mero Jyotish | Mero Jyotish
ज्योतिषमा राहु (Rahu) ग्रहको महत्व र यो ग्रहले मानव जीवनमा पार्ने प्रभाव
ज्योतिषमा राहु (Rahu) एक छाया ग्रह हो जसले स्थान वा कुन ग्रहसँग रहेको छ त्यो ग्रह अनुसारको परिणाम दिन्छ। यो लेखमा हामी राहु ग्रहको वैदिक ज्योतिषमा के महत्व छ?, यो ग्रहले मानव जीवनलाई कसरी प्रभावित गर्दछ? कुण्डलीमा यस ग्रहको के महत्व छ? यसको साथै यो ग्रहको यन्त्र, मन्त्र, रत्न तथा रंगको बारेमा जानकारी दिनेछौं, जुन तपाईंको लागि धेरै सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ। त्यसोभए आउनुहोस् जानौं राहु ग्रहको बारेमा –
खगोलीय दृष्टिले राहुको कुनै अस्तित्व छैन तर राहुको वैदिक ज्योतिषमा धेरै महत्व रहेको छ, जसको बारेमा हामी तपाईंलाई अगाडि बताउँनेछौं।राहु ग्रहलाई हिन्दू धर्ममा अशुभ वा असुर मानिन्छ। राहुको नै एउटा भाग केतु ग्रह हो। यसको बारेमा पौराणिक कथा हामी तपाईंलाई अगाडि बताउँनेछौं कि कसरी राहु तथा केतुको जन्म भयो।
राहु ग्रहको वैदिक ज्योतिषमा महत्व
वैदिक ज्योतिषमा राहु ग्रहलाई एक क्रुर ग्रह मानिएको छ। वैदिक ज्योतिषमा राहु ग्रहलाई कठोर वाणी, जुआ, दुष्ट कर्म, त्वचाको रोग आदिको कारक भनिएको छ। ज्योतिषहरुको भनाई छ कि जुन जातकको कुण्डलीमा राहु अशुभ स्थानमा रहेको छ अथवा कुण्डलीमा कमजोर वा कुनै अन्य ग्रहबाट पीडित छ भने यसले जातकलाई नकारात्मक परिणाम दिन्छ । ज्योतिषमा राहु ग्रहलाई कुनै पनि राशिको स्वामित्व प्राप्त छैन, तर मिथुन राशिमा यो ग्रह उच्च हुन्छ र धनु राशिमा यो नीच हुन्छ।
वैदिक ज्योतिषमा राहु ग्रह २७ नक्षत्रहरुमध्ये आर्द्रा, स्वाति र शतभिषा नक्षत्रको स्वामी मानिएको छ। जस्तो कि हामीले पहिले नै तपाईंलाई जानकारी दिईसक्यौ कि ज्योतिषमा राहु ग्रहलाई एक छाया ग्रह मानिएको छ। यस्तो भनिन्छ कि जब सूर्य र पृथ्वीको बीचमा जब चन्द्रमा आउँछ तब पृथ्वीमा पर्ने चन्द्रमाको छायाले राहु ग्रहको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
वैदिक ज्योतिषमा राहुकाल
वैदिक हिन्दू पन्चाङ्गको अनुसार राहु ग्रहको प्रभावको कारणले नै पुरा दिनमा एक यस्तो समय हुन्छ, जसलाई ज्योतिषमा अशुभ समयावधि मानिन्छ। जुन समयमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नु वर्जित मानिएको छ। यहि अवधिलाई राहुकाल भनिन्छ। यो राहुकाल अवधि लगभग डेढ़ घण्टाको हुन्छ र स्थान एवं दिन अनुसार यो समयमा अन्तर हुन सक्छ।
राहु ग्रहको मानव जीवनमा प्रभाव
यदि शारीरिक संरचनाको दृष्टिले हेरिन्छ भने र वैदिक ज्योतिषमा उल्लेखित तथ्यहरुलाई उपयोग गरिन्छ भने जुन जातकको कुण्डलीमा लग्न भावमा राहु (Rahu) विराजमान हुन्छ, त्यो जातक सुन्दर र आकर्षक व्यक्तित्व वाला हुन्छ। जातक साहसिक कार्यहरुमा पछाडी नहट्ने स्वभावको हुन्छ। जीवनमा जोखिम लिने हुन्छ। जातक समाजमा प्रभावी वा प्रतिष्ठावान बन्छ, तर ज्योतिषीहरुको यो मत छ कि यसको प्रभाव तथा परिणाम लग्नमा स्थित राशिमा निर्भर हुन्छ। तर ज्योतिष अनुसार यो मानिन्छ कि लग्न भावमा स्थित राहुले जातकको वैवाहिक जीवनमा समस्या उत्पन्न गर्दछ।
कुण्डलीमा राहु प्रभावी वा कमजोर हुनु
राहु ग्रहको कुण्डलीमा प्रभावी हुनुले व्यक्तिलाई आफ्नो स्थिति अनुसार परिणाम दिन्छ। यस्तो भनिन्छ कि यदि राहु कुनै जातकको कुण्डलीमा शुभ स्थितिमा रहेको छ भने त्यसले जातकको भाग्य चमकाउँछ र यसको साथै जातक तेज बुद्धिवाला हुन्छ। जातक समाजमा मान-सम्मान र यश प्राप्त गर्दछ।
यदि कुण्डलीमा कमजोर राहु छ भने यसले जातकलाई नकारात्मक परिणाम दिन्छ। यसले जातकमा विसंगति पैदा गर्दछ। कमजोर राहु (Rahu) को प्रभावले जातकमा कपटी वा धोखाधड़ीको भावनाले जन्म लिन्छ। यसको साथै जातक मांस मदिराको सेवन गर्ने हुन्छ। जातक धर्मको मार्गबाट विचलित हुन्छ।
राहुको पौराणिक महत्व
राहु स्वरभानु नामक एक असुरको शिर हो। यसको बारेमा पौराणिक कथाहरुमा विस्तारले बताइएको छ। यो कथा समुन्द्र मन्थनसँग जोडिएको छ। छलले स्वरभानु नामको राक्षस देवताहरुको साथमा बसेर दिव्य अमृतको केहि थोपा पिउँछ। तत्पश्चात् त्यस असुरलाई सूर्य र चन्द्रमाले चिन्दछन् र मोहिनी अवतार लिएका भगवान विष्णुलाई बताउँछन्। यो भन्दा पहिले कि अमृत त्यस असुरको घाँटीबाट तल पेटमा जाओस्, विष्णु भगवानले सुदर्शन चक्रबाट त्यसको घाँटी काटेर शिर र शरीर भिन्न गर्दिनु हुन्छ, तर त्यस असुरको शिर अमर भैसकेको थियो। त्यस असुरको शिर राहु ग्रह बन्यो।
यन्त्र - राहु यन्त्र
मन्त्र - ऊँ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः
रंग - निलो
उपाय – राहु (Rahu) ग्रहको उपायको लागि तपाईंले कालो कुकुरलाई खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ। यसको साथै तपाईं आफ्नो घरमा वा आफ्नो साथमा राहु यन्त्र राख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई सकारात्मक परिणाम तथा लाभ प्राप्त हुन सक्छ।